Ulayini wokukhiqiza we-Meltblown nonwoven
Imikhiqizo yochungechunge lwamabhizinisi asetshenziswa kakhulu embonini, ezolimo, ezokuvikela izwe lonke, imboni yamakhemikhali, ezokuvakasha kwezemidlalo, inhlanzeko, ukuhlobisa ikhaya, ukupakisha, impilo neminye imikhakha.
Kuhle Inani SMS Kuhlinzwa ingubo SMS Nonwoven Indwangu mac ...
SMS PP Melt-kushaywa Nonwoven Indwangu Production Line, N ...
Kuhle Intengo SMS Kuhlinzwa SMS Nonwoven Indwangu umshini ...
Spunmelt esiyinhlanganisela umugqa ukukhiqizwa nonwoven, spunbon ...
PP Meltblown Production Nonwoven Indwangu Ukwenza Machi ...
1600mm Melt-Blown Indwangu Ukwenza Machine PP Nonwoven ...
Non-nokwelukiweyo Indwangu ukukhiqizwa umugqa China polypropylene ...
SMS PP Spunbond Meltblown Composite Nonwoven Indwangu ...
Okuzenzakalelayo bfe 99 kk meltblown Indwangu nonwoven Phro ...
High Quality Non Nokwelukiweyo Indwangu Ukwenza Machine, Ngokugcwele ...
SMS SS S PP Spunbond Nonwoven Indwangu Ukwenza Machine ...
Umshini Wezindwangu Ohamba Phambili we-SMS we-SMS we-Nonwoven Indwangu Umshini Ophakeme Wekhwalithi Ephakeme we-PP Spunbond Nonwoven Fabric Production Lin
1. Esilula: I-polypropylene resin isetshenziswa njengezinto ezisetshenziswayo eziyinhloko zokukhiqiza, ezinamandla adonsela phansi we-0,9 kuphela, okuyizingxenye ezintathu kwezinhlanu kuphela zikakotini. Iyabhibha futhi izwa kamnandi…
I-SMS PP Melt-blown Nonwoven Fabric Production Line, Izinsiza Zokukhiqiza Zendwangu Engavuthiwe
Phakathi kwezinto zokwenziwa ezimbonini, izindwangu ezingalukiwe zinezici zokusebenza kahle kokuhlunga, ukwahlukanisa, ukufudumeza ukushisa, ukumelana ne-asidi, ukumelana kwe-alikhali, kanye nokumelana nezinyembezi. Zisetshenziselwa kakhulu ukwenza imidiya yokuhlunga, ukwahlukanisa umsindo, ukufakwa kagesi, ukupakisha, ukufulela nezinto zokwakha, njll. Umkhiqizo.
Umshini Wezindwangu We-SMS ohamba phambili we-Best Price SMS Nonwoven Fabric High High PP Spunbond Nonwoven Fabric Production Lin
Umugqa Wokuhlinzwa Kwendwangu Wensimbi ye-SMS SS Nonwoven Indwangu Umshini Osezingeni Eliphezulu we-PP Spunbond Nonwoven Fabric Production Line
Izici zendwangu engavukiwe ye-Spunbond: amandla aphezulu, ukumelana okuhle kokushisa okuphezulu (kungasetshenziswa isikhathi eside endaweni eyi-150 ℃), ukumelana nokuguga, ukumelana ne-UV, ukunwebeka okuphezulu, ukuzinza okuhle nokuvunyelwa komoya, ukumelana nokugqwala, ukwahlukanisa umsindo, i-mothproof, Non-toxic.
Spunmelt esiyinhlanganisela umugqa ukukhiqizwa nonwoven, spunbonded umugqa ukukhiqizwa nonwoven
1. Ukugeleza kwenqubo yonke kwemishini engalukiwe kungenziwa kube okuzenzakalelayo ngokuphelele, futhi kudingeka abantu abangu-1 ~ 2 kuphela ukuthi basebenze, okungagcina abasebenzi abalinganiselwe…
PP Meltblown Production Nonwoven Indwangu Ukwenza Machine Production Line
Kulezi zinsuku, ukusetshenziswa kwezindwangu zokulingisa ezingasuki ezilukiwe kusesejwayelekile. Ngaphezu kwezingubo esivame ukugqoka, izindwangu ezingalukiwe ezisontwe nazo ziyadingeka kumaski athandwayo. Imakethe enkulu yezindwangu ezingezona ezelukiwe ze-spunbond iphinde inikeze umugqa omkhulu wokukhiqiza wendwangu ongalukanga osebenzisa kakhulu. Ngemuva kokusebenzisa ulayini wokukhiqiza wendwangu ongalukwanga we-spunbond imishini yokukhiqiza okuzenzakalelayo okunesivinini esikhulu, abantu bangakhiqiza ngobuningi. Izindwangu eziningi ezingalukiwe eziphothiwe zikhiqizwa ukuhlangabezana nezidingo zemakethe.
1600mm Melt-Blown Indwangu Ukwenza Machine PP Nonwoven Machine Production Line
Izindwangu ze-Spunbond ezingalukiwe zibalulekile kwizindwangu ezingezona ezelukiwe ze-spunbond. Izindwangu ze-Spunbond ezingalukwanga zakhiwa ngemuva kokuthi i-polymer ikhishwe futhi yelulwe ukuze yakhe imicu engaqedi. Imicu ibekwa enetheni, futhi inetha le-fiber liphukile.
Umugqa wokukhiqiza wendwangu ongavukiwe China umshini wokukhiqiza indwangu we-polypropylene spunbond
Uhlelo lokukhiqiza lubizwa nangokuthi uhlelo lwe- “S” noma “SB” ngamafuphi. Ulayini wokukhiqiza okhiqiza izindwangu ezingalukwanga ngenqubo ye-spunbond ubizwa ngokuthi ulayini wokukhiqiza ongaphothiwe owenziwe ngesipuni. Ukuze uthuthukise ukusebenza kolayini wokukhiqiza kanye nekhwalithi yomkhiqizo, ulayini wokukhiqiza ungafakelwa amasistimu wokuphotha amaningi we-spunbond, angahlanganiswa abe ulayini wokukhiqiza ongena nge-SS noma we-SSS spunbond.
I-SMS PP Spunbond Meltblown Composite Nonwoven Fabric Ukwenza Imishini Yokukhiqiza Yezicubu ezimanzi
Ububanzi besicelo: Lo mugqa wokukhiqiza unezici zekhwalithi ezinzile nethembekile, isivinini esikhulu, isivuno esikhulu nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Imikhiqizo ekhiqizwa yile ulayini wokukhiqiza isetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukene, njengokwelashwa, ubuhlengikazi, ukuthuthwa kwendle, ezolimo, ukwakhiwa, ukuthuthwa kwendle, umsebenzi wasemhlabeni, njll. Ukucaciswa okuyinhloko Ububanzi bomshini: amamitha ayi-1.6 amamitha angu-2.4 amamitha angu-3.2. Isakhiwo: S SS SSS SMS SMMS SSMMS (kuya ngomkhiqizo)
Okuzenzakalelayo bfe 99 kk meltblown indwangu nonwoven Production Line okungezona nokwelukiweyo Indwangu ukwenza umshini
Indwangu ye-Meltblown non-woven idlala indima yokuhlukaniswa kanye nokuhlungwa emaskini, ivikela umzimba womuntu ekuhlaselweni uthuli, amabhaktheriya, kanye nama-virus, kunciphisa ukutheleleka okuhlukahlukene, futhi kuvikela ngempumelelo impilo yomuntu.
Ikhwalithi ephezulu Non Nokwelukiweyo Indwangu Ukwenza Machine, okuzenzakalelayo ngokugcwele PP Spunbond Nonwoven Production Line
Le polypropylene (PP) spunbonded nonwoven ukukhiqizwa kwendwangu linezinzuzo zokusebenza okuphezulu, umbala omuhle, nekhwalithi enhle. Ingakha i-fiber web symmetrically futhi iphelele ngezinhlobo. Ingangeza futhi izinto ezenziwe kabusha nokufaka izinto ukuze kunciphise izindleko zemikhiqizo.
I-SMS SS S PP Spunbond Nonwoven Indwangu Yokwenza Umshini I-PP Nonwoven Indwangu Yokukhiqiza Umugqa
Umugqa wethu wokukhiqiza we-ss spunbond nonwoven usebenzisa ubuchwepheshe besimanje obuphambili kanye nesipiliyoni, kulula ukusebenza, okuzenzakalelayo ngokuphelele, ukulawula kwesikrini se-PLC, umkhiqizo omuhle, isivinini esikhulu, okukhipha okuphezulu. Okokusebenza kuvamise ukuba ngu-1.6 m ububanzi, 2.4 m ububanzi noma 3.2 m ububanzi, futhi kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo ezithile zamakhasimende.
Igumbi 401, Ikomidi Lokuphatha leSuning County Economic Development Zone, Idolobha laseCangzhou, esifundazweni saseHebei
Amathegi ashisayo, Hot Products, Ibalazwe amagama okuhlola, Amagama angukhiye B, Amagama angukhiye A,